Moto G5S Plus, waan kuu tijaabinay | Androidsis
Waxaan ka faa'iideysanay joogitaankeenna IFA ee Berlin oo aan ka warrameyno dhammaan wararka ka soo baxa carwada korantada ugu weyn si aan ugu tagno istaagga Motorola si aan u aragno dhammaan wararkeeda. Waxaan horeyba kuu siinay fikradayada kadib markaan isku daynay Moto X4 iyo Moto G5S, hada taabo qaar Dareenka ugu horreeya ee Moto G5S Plus, nooca fitamiin ee xubnaha cusub ee qoyska Moto G, oo u taagan nidaamkiisa laba qol.
2 Astaamaha farsamada ee Moto G5S Plus
Motorola waxay go'aansatay inay bixiso a bood tayo leh khadkeeda 'Moto G' oo bixiya dhamayn tayo leh. Marka laga hadlayo Moto G5S Plus waxaan ka helaynaa, sida nooca kafeega badan leh, oo leh jirka aluminium ka sameysan oo runtii runtii gacanta ku jira.
Telefoonku wuxuu bixiyaa dareen aad u wanaagsan markaad soo qaadatid iyo Waxaan dhihi karaa inay aad isugu dheelitiran tahay. Waxaan la yaabanahay in taleefan leh qiimahan uu leeyahay tayada dhameystirka. Waxaan sidoo kale ugu bushaareynayaa Motorola inay meesha ka saartay dareeraha faraha aan macquul ahayn si ay u bixiso nooc ka yara weyn oo si fiican loo isticmaalo
Astaamaha farsamada ee Moto G5S Plus
Nooca iyo qaabka
Xallinta 1080P Full HD (1920 x 1080 pixels) 401 ppi
Dabool galaaska Corning ™ Gorilla ™ Muraayad 3
processor 625 GHz Octa-Core Qualcomm Snapdragon 2.0
GPU Adreno 506 oo ah 650 MHz
RAM 3 GB ama 4 GB waxay kuxirantahay tusaalaha
Kaydinta 32 ama 64 GB oo lagu ballaarin karo kaarka microSD illaa 128 GB
Qolka weyn labo 13 Mpx + dual flash flash- ƒ / 2.0 aperture + 8x zoom dijital ah
Kaameerada hore 8 megapixels + LED Flash + f / 2.0 furitaanka
Sensors Dareeriyaha faraha + Accelerometer + gyroscope + shidma nalka muusikada + dareeraha dhawaanshaha
Xuduudaha kala duwan Bluetooth 4.1 LE + 802.11 a / b / g / n (2.4 GHz + 5 GHz)
Dekadaha Micro USB + 3.5mm Jack audio + Dual nano-SIM booska
Batariga 3000 mAh oo leh tikniyoolajiyad lacag-bixin deg deg ah (lix saacadood oo is-maamul ah oo keliya 15 daqiiqo oo lacag ah
Cabbirada 153.5 x 76.2 x 8.00 ilaa 9.5 mm
Waxyaabaha Aluminium Anodized ah
Dhamaad Grey Lunar - Dahab Dahab
Qiimaha laga bilaabo 299 euro qaabka leh 4 GB RAM iyo 64 GB ROM
Qalabka ku dhejinaya Moto G5S Plus waxaa iska cad in taleefanku awoodi doono inuu dhaqaajiyo ciyaar kasta ama codsi dhib la'aan ah, iyadoon loo eegin inta garaaf ee garaafku u baahan yahay. Qalabka wuxuu leeyahay astaamo farsamo oo kufilan adeegsade kasta Iyo, haddii aan tixgelinno sicirka la hagaajiyay, waxaan horteenna ku haynaa mid ka mid ah xulashooyinka ugu fiican haddii aad raadineyso taleefan wanaagsan oo ku habboon qiimaha la hagaajiyay.
Gaar ahaan waxa xusid mudan waa shaashadeeda 5.5-inji oo siineysa tayo muuqaal tayo sare leh, oo leh midabbo muuqda oo fiiqan, marka lagu daro labadeeda kamaradood oo ka farxin doona dadka jecel sawir qaadashada iyada oo ay ugu wacan tahay suurtogalnimada samaynta sawiro leh bokeh ama saameyn cakiran.
Adigana Sideed u aragtaa Moto G5S Plus cusub?
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Motorola » Moto G5S Plus, waanu kuu tijaabinay
Boostada Qiimaha Leh!
Waa qalab aad u wanaagsan, waxaan hayaa illaa saddex bilood. Waxa kaliya ee aanan ku qanacsaneyn ayaa ah af hayeenka uu haysto, waxaad sameyneysaa filim ama duubis wuxuuna u muuqdaa mid HORRIBLE ah !!
Ku jawaab Florence
Sida aad u heysato 3 bilood ka hor haddii ay soo baxday dhowr toddobaad ka hor, waxaa laga yaabaa inaad ku jahwareerto Moto G5plus, kani waa moto G5Splus
Ku soo jawaab Matías
Ugudambeyn ma cadda in uu leeyahay aaladda sawirka faraha ama in kale. Bilowga qoraalka waxaa ku qoran in ay ku hambalyeynayso Motorola soo bixitaankeeda, laakiin goor dambe qeybta dareemayaasha waa lagu soo daray ..
Sideed u yeelan doontaa 3 bilood ka hor haddii ay soo baxday dhowr toddobaad ka hor
G5 wuxuu la mid yahay G4, wali isticmaalaha g4 wuxuu dhahaa, waxaan sugi doonaa 6da inay soo baxaan maadama G4 sidoo kale yeelan doono Android ka dibna ...
Jawaab Eysen Valdivieso Gonzales
Qalab aad u wanaagsan, oo leh awood xusuus wanaagsan oo gudaha ah, waxay ii sahlaysaa shaqadayda, waxa kaliya ee aanan ku qanacsanayn ayaa ah inaan awoodi waayay inaan helo gacmo-la’aan oo ay aqoonsan yihiin qalabku inay ka jawaabaan oo taleefan ka diraan.
Ku jawaab Marcia
Aad u fiican waxaan haystaa Dr 1045 mana heli karo kaarka Logic
Mid baan haystay muddo laba bilood ah waxayna bilowday inay kululaato, xirto, ugu dambayntiina kaligeed xirto. Waxay u wareegeen android 7.0 shilkiina wuu sii socdaa.
Waad salaaman tihiin, wali waxaan hayaa mid aan impeccable ahayn, shaqsiyan labadeena sifiican ayaan usameynaa, wax walba oo taleefankaan kujira waan ku sameyn karaa dhib la'aan, laakiin cillada yar ee kaliya ee aan helay waa dadka kuhadlaya speakers.
Salaan kadib waxaan iibsaday MG5 oo lagu daray
Isku motog4 lagu daray laakiin macdan ah
Jawab John Abella